सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत नङकाे रङले पनी देखाउछ - ज्ञानविज्ञान
सावधान ! गम्भीर रोगको संकेत नङकाे रङले पनी देखाउछ
नङले औँलाको शोभा बढाउँछ । युवतीहरू अनेक पालिसले नङ रंग्याएर औँला आकर्षक बनाउँछन् । तर, के नङलाई सौन्दर्यसँग मात्रै जोडेर हेरे पुग्छ ? होइन । तपाईं आफ्नो नङ हेरेर शरीरमा लागेका विभिन्न रोगबारे पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । आफ्नो नङको रंग र आकारअनुसार पत्ता लगाउनुहोस् रोग :
मोटो र पहेँलो
नङको आकार मोटो हुँदै गएको छ, तर लम्बाइ भने बढ्न छोडेको छ भने फोक्सोमा समस्या हुन सक्छ । यो वेला नङको रंग पहेँलो हुन थाल्छ ।
पातलो र फुट्नु
नङ निकै पातलो हुँदै गएको छ र पानीमा हात डुबाउँदा नङ टुक्रिने÷चिरिने, रुखो देखिने भएको छ भने थाइराइड टेस्ट गर्नुहोस् । उच्च अवस्थाको थाइराइड नङको जराबाट पनि निस्किन सक्छ ।
फिका र सेतो
नङको रंग आधा फिका र आधा सेतो देखिएको छ भने जान्नुहोस् कि रगतमा ‘रेड ब्लड सेल’ कम बनिरहेको छ । यस्तो वेला अत्यधिक आइरन पाइने खानेकुराको जरुरत पर्छ ।
नङको रंग गाढा निलो देखिएको छ भने शरीरले आवश्यक मात्रामा अक्सिजन प्राप्त गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । यति वेला श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग या नाडीमा समस्या हुन सक्छ ।
नङको रंग धेरै रातो देखिन थालेको छ भने याद राख्नुहोस् कि हाई ब्लडप्रेसरको संकेत देखियो । यस्तो वेला मुटु धेरै जोखिममा रहेको हुन्छ ।
मधुमेह के हो ? कसरी बँच्ने ?
मधुमेह अर्थात डाइबेटिसलाई सामान्यभाषामा चिनिको रोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थिबाट उत्पादन हुन् । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुदा मधुमेह हुन जान्छ ।
रगत विना रक्तसंचार प्रणालीको कल्पना गर्न सकिदैन । पानी , रक्तकोष , विभिन्न लवण तथा रसायनहरुको समिश्रणबाट बनेको रगतमा तत् तत् पदार्थहरु निश्चित अनुपातमा रहेका हुन्छन् ।
यदि रगतमा भएका कुनै पनि पदार्थको मात्रा अर्थात गुणमा परिवर्तन भयो भने समग्र रक्तसंचार प्रणाली र सरिरको आन्तरिक कार्यसंचालनमा बाधा पुग्छ जान्छ ।जिवन यापनमा आइरहेको परिवर्तन , विलासी जिवलशैली तथा भौतिक मेहेनतको कमीले मधुमेहका रोगी दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।
विश्वमा करीब २२ करोड मानिस मधुमेह बाट प्रभावित रहेको र आगामी २०३० सम्ममा यो संख्या दोब्बर हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
नेपालमा पनि ४० वर्ष सम्म उमेर समुहका करीब १५ प्रतिशत मधुमेहबाट ग्रसित रहेको र सो उमेर समुहभन्दा माथिका करीब १९ प्रतिशतलाई मधुमेह लागेको बताइएको छ ।
यदि तत्काल कुनै प्रभावकारी कदम नचालिएमा आउदो १० वर्षमा मधुमेहबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ५० प्रतिशतले बढ्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
यो सामान्यतया बालबालिकामा हुने गर्छ । जहा इन्सुलिनको उत्पादन सुन्य अर्थात अत्यन्त न्युन हुन्छ । रोगीलाई बचाउन कृत्रिम रुपमा इन्जेक्सनद्धारा इन्सुलिन दिनुपर्ने हुन्छ ।
यो सामान्यतया प्रौढ अवस्थामा हुने गर्छ र विश्वमा भएका मधुमेही मध्ये धेरै यही प्रकारको मधुमेहका रोगी रहेका छन् । यसमा प्यांक्रियाजले कम इन्सुलिन उत्पादन गर्छ र सरिरले पनि इन्सुलिनको ग्रहण गर्न असक्षम हुन्छ । उमेर बढ्दै जादा यो प्रकारको मधुमेहबाट व्यक्ति ग्रसित बन्ने गर्छन् ।
गर्भबती महिलाहरुमा जुनैपनि बेला रगतमा चिनिको मात्रा उच्च हुनगइ मधुमेह हुनजान्छ । यस्तो प्रकारको मधुमेहलाई जेस्टेसनल मधुमेह भनिन्छ ।
४. धुम्रपान, मध्यपान त्याग्ने
Don't Miss it चुरोट छाडेकाे २० मिनेटपछि नै देखिन थाल्छन् यस्ता परिवर्तन
Up Next याद गर्नुहाेस् ! यस्ताे भयाे भने क्यान्सर हुनसक्छ
१. पृथ्वीको चुम्बकीय शक्तिको बारेमा धेरै अनुसन्धान भएका छन् । तर, यो चुम्बकीय शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने अहिलेसम्म पत्ता लागेको…